२०७७ असार २५ बिहीबार ०७:०९:००
महामारीले पनि इतिहासदेखिनै सीमान्तीकृत वर्ग र समुदायलाई बढी असर पारेको छ र प्रदर्शनको आगोमाथि थप घिउ खन्याएको छ
यो वर्ष अप्रिलको अन्त्यसम्ममा तीन सय विलियन जनसंख्या भएको र सबैभन्दा धनी मुलुक कोभिड-१९ को चपेटामा प-यो । यहाँ प्रत्येक पाँच हजारमा एकजनाभन्दा बढीलाई खानाको अभाव छ । त्यसो त महामारीअघि पनि त्यहाँको स्थिति अनुकूल थिएन ।
झन्डै १४ प्रतिशत जनसंख्या खाद्य सहयोगमा निर्भर थियो, प्रत्येक ६ मा एक बालबालिकाको पोषणयुक्त खानामा पहुँच थिएन र झन्डै दश लाख कुपोषणका सिकार थिए । अहिले लाखभन्दा बढीको ज्यान लिइसकेको कोभिड-१९ का कारण मात्र मुलुक संकटग्रस्त छैन, नोभेम्बरमा चुनाव नजिकिँदै गर्दा देखिएको राजनीतिक अस्तव्यस्तता, प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीचको हिंसात्मक झडप, बढ्दो लुटपाट र रक्तपातका कारण पनि मुलुक त्यत्तिकै संकटमा छ ।
यो आन्दोलनमा पत्रकारसमेत निसानामा छन् भने सयौँलाई समाएर थुनिएको छ । राजनीतिक अस्थिरता झन् बढ्ने निश्चित देखिँदै छ किनकि महामारीले पनि इतिहासदेखिकै सीमान्तीकृत र विपन्न वर्ग र समुदायलाई बढी असर पारिरहेको छ । यसले पनि प्रदर्शनको आगोमाथि थप घिउ खन्याएको छ । केलाई मानवीय संकट भनिन्छ ? यसका विशेषता के हुन् ?
क्यानडाको कल्याणकारी संस्था ह्युमनिटरियन कोलिसनले आमसमुदायको स्वास्थ्य र सुरक्षामा जब चरणबद्ध रूपमा चुनौती आउँछ, त्यो नै मानवीय संकट हो भनी परिभाषित गरेको छ । अझ बृहत्मा यस्तो मानिस वा प्रकृति सिर्जित प्रतिकूलताले महिला, बालबालिका, आप्रवासी र शरणार्थीलगायत सीमान्तीकृत समुदायलाई थप चपेटामा पार्ने गर्छ । किनकि उनीहरूसँग संकटको सामना गर्न सक्ने हैसियत हुँदैन । यसरी हेर्दा विगत केही हप्तादेखि अमेरिका मानवीय संकटबाट गुज्रिरहेको छ भन्न सकिन्छ ।
०१४ को एउटा रिपोर्टले देखाएको छ कि १९७० देखि २०१० सम्म दोहन भएको ३९ अफ्रिकी मुलुकको साधन र स्रोतको मूल्य तिनले पाउने कुल ऋणभन्दा चार गुणा बढी थियो । यसको अर्थ अफ्रिका ग्लोबल नर्थ वा श्वेत सम्प्रभु मुलुकप्रति आश्रित छैन भन्ने देखिन्छ ।
मानवीय संकटलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि ठाउँअनुसार फरक पर्छ । कुनै निश्चित क्षेत्रको संकटलाई मिडियाले समेत रंग, जातिवाद वा क्षेत्रीय दृष्टिकोण राखेर पस्किन्छन् । नपत्याए अफ्रिकाको इबोला संकटलाई कसरी लिइएको थियो र कोभिड–१९लाई कसरी लिइँदै छ, तुलना गरे हुन्छ । यो विभेद विश्व शक्ति सन्तुलनका आधारमा हुने गरेको छ र यो सन्तुलनमा युरोपियन श्वेत तथा तिनका डायस्पोरा उच्च स्थानमा विराजमान छन् भने अश्वेत समुदाय सबैभन्दा पुछारमा छन् । त्यसैले उनीहरू आफूलाई श्रेष्ठ सम्झिँदै दक्षिणी गोलाद्र्धका अफ्रिकी मुलुकका संकटलाई मानवीय करार गर्दै सहयोग गर्नु आफ्नो दायित्व सम्झिन्छन् ।
मिडियाको भाषा पनि महादेशअनुसार फरक पर्छ ।
जब अफ्रिकाका विकासशील मुलुकमा उनीहरू इत्तरको कोही निरंकुश सत्तामा आउँछ, त्यहाँ निरंकुश, हत्यारा, भ्रष्टजस्ता शब्दावली प्रयोग गरिन्छन् । तर, जब अमेरिकामा त्यस्तै शासक आउँछन्, सभ्य शब्दहरू प्रयोग गरिन्छन् । अहिलेको ट्रम्पकै प्रशासनविरुद्ध पनि कडा शब्द प्रयोग गरिँदैन, जति कुनै अफ्रिकी नेताविरुद्ध गरिन्छ । किनकि जे भए पनि उनीहरू विकसित र विकासशील मुलुकबीचको विभेदलाई राखिराख्न चाहन्छन् ।
आफूलाई सभ्य तथा सुसंस्कृत एवं दक्षिणी गोलाद्र्धका अफ्रिकी मुलुकलाई विपन्न, रोग, भोकमरी र द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रको रूपमा चिनाइरहन चाहन्छन् । अल्प विकसित वा विकासशील भन्ने पदावलीले सधैँ यही नै देखाउन चाहन्छ । तर, २०१४ को एउटा रिपोर्टले देखाएको छ कि १९७० देखि २०१० सम्म दोहन भएको ३९ अफ्रिकी मुलुकको साधन र स्रोतको मूल्य तिनले पाउने कुल ऋणभन्दा चार गुणा बढी थियो । यसको अर्थ अफ्रिका ग्लोबल नर्थ वा श्वेत सम्प्रभु मुलुकप्रति आश्रित छैन भन्ने देखिन्छ ।
अर्को कुरा आफैँलाई सर्वोत्कृष्टको रूपमा प्रस्तुत गर्दा तिनले आफ्नै समाजभित्र अन्तरनिहित समस्या पहिचान गर्न चुकिरहेका छन् । तिनका आफ्नै ढोकाअगाडि उभिएका दीनहीन र भोका–नांगाहरूलाई आफ्नो संयन्त्रका माध्ययमबाट संरक्षण गर्न चुकिरहेका छन् । जवाफदेहिता नभएका ट्रम्पजस्ता नेतृत्व जन्माइरहेका छन् ।
सिएआरई इन्टरनेसनलले २०१९ का १० मानवीय संकटको सूची निकालेको छ, जसमा नौवटा अफ्रिकामा घटेको देखाइएको छ भने एउटा मात्र उत्तर कोरियाको देखाइएको छ । यसका लागि तिनले युरोपियन कमिसनको मानवीय संकटको परिभाषा ‘अपर्याप्त वैदेशिक सहयोग प्राप्त भएको’ तथ्यांकलाई आधार बनाएका छन् । यसरी नै मानवीय संकटलाई आधार मान्ने हो भने के अहिलेको अमेरिकाको संकट मानवीय संकटमा पर्दैन ?
(गाथारा केन्या, नैरोबीका सुप्रशिद्ध राजनीतिक कार्टुनिस्ट तथा लेखक हुन्)
लकडाउनले मानवीय संकटमा लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक
भारतको लकडाउन मानवीय संकट बन्दै
गम्भीर मानवीय संकट झेल्दै भेनेजुएला
देशवासीका नाममा ट्रम्पको सम्बोधन, अमेरिकी सीमा क्षेत्रमा मानवीय संकट : ट्रम्प